‘लिभिङ बाई गिभिङ’को मुख्य फोकस अपाङ्गताको क्षेत्रमा’ – Arthik Awaj
‘लिभिङ बाई गिभिङ’को मुख्य फोकस अपाङ्गताको क्षेत्रमा’
लायन्स मार्फत ३ दशकभन्दा बढी सामाजिक काममा सक्रिय बनेका अशोक कुमार श्रेष्ठ लायन वर्ष २०१८÷१९ का लागि डिष्ट्रिक्ट गभर्नर बनेका छन् । मोफसलबाट गभर्नर जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगेका श्रेष्ठले लिभिङ बाई गिभिङ नारामार्फत अपाङगता भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न क्लबहरुलाई आग्रह गरेका छन् र सोही अनुसार क्लबहरुको सक्रियता छ । यसै सन्दर्भमा गभर्नर श्रेष्ठसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
मोफसलबाट गभर्नर हुनुभएको छ । कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ को लायन वर्ष २०१८÷१९ को गर्भनर भएर काम गरिरहेको छु । पहिला काठमाडौं पोखरा लगायतका शहरमा रहेकाहरु मात्र गर्भनर बन्ने चलन थियो । मोफसलमा बस्नेले पनि अवसर पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थिएँ । समय दिन सक्ने र काम गर्न सक्ने व्यक्ति जहाँको भएपनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । म जुन उद्देश्यले गभर्नर भएको थिएँ, त्यो उद्देश्य र लक्ष्यमा पुग्न सफल भइसकेको छु भन्ने लाग्छ । म गभर्नर बन्नु जिल्लाको नै ईज्जत तथा प्रतिष्ठा जोडिएको छ । मेरो लागि यो अवसर पनि हो । धेरै चुनौति पनि छन् । मोफसलमा बसेर पनि गर्भनर भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने. सबैलाई आभास भएको छ । मैले जिल्लामा पनि सबैको साथ तथा सहयोग पाएको छु ।
‘दिएर बाँचौं’ मूल नारा अन्तर्गत केकस्ता काम भइरहेका छन् ?
करिव ३१ वर्ष पहिलेदेखि म लायन्समा आवद्ध छु । यसबीचमा मैले धेरै अनुभव बटुलेको छु । गर्भनर हुँदा आप्m्नो नारा ल्याएर त्यसलाई सफल बनाउने चलन छ । मैले पनि ‘लिभिङ बाई गिभिङ’ (दिएर बाचौं) नारा ल्याएको छु । यो नाराले लायन्सलाई ब्राण्डिङ गर्न सफल भएको छ । मानिस लिनको लागि मात्र नभई दिनको लागि पनि जन्मेको हो । यसलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् । दिएर बाचौंको मुख्य फोकस अपाङ्गता भएका मानिस छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खोजी गरी के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित गराउन यस कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउँछ । अपाङ्गता हाम्रो आत्मियता भनेर काम गर्ने हो र गरिरहेका छौं ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको सहयोगमा क्लबहरुको सहभागिता कस्तो छ ?
अपाङ्गताको प्रकृति हेरी त्यसै अनुसार ह्विल चेयर, सेतो छडी, श्रवण यन्त्र लगायतका सामग्री वितरण गर्न सकियो भने उनीहरु पनि समाजमा स्थापित हुन सक्नेछन् भन्ने मेरो मान्यता हो । सामग्री पाएपछि उक्त व्यक्तिले राहतको महसुस गर्छ र मपनि केही गर्न सक्छु भन्ने भावना जागृत हुन्छ । यो नारा अन्तर्गत काम गर्न डिष्ट्रिक्टले गरेको आह्वानमा क्लबहरुको सहभागिता राम्रो छ । कार्यक्रमले धेरै व्यापकता लिएको छ । सबै क्लबका साथीहरुले यसलाई आत्मसात गर्नुभएको छ । धेरै राम्रोसँग कार्यक्रम भएका छन् । अहिलेसम्म करिब ५ सय भन्दा धेरै ह्विल चेयर वितरण भएका छन् । कार्यक्रमलाई शहरमुखी भन्दा गाउँ केन्द्रित गर्नुपर्छ । गाउँमा रहेका अपाङ्गता भएका कतिपय मानिसलाई ह्विल चेयर भयो भने मलाई सहज हुन्छ भन्नेसम्म पनि थाहा पनि छैन । हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगिरहेका छौं । सेतो छडी अहिलेसम्म करिव १२ सय भन्दा धेरै वितरण भइसकेका छन् । जसले दृष्टिविहिनलाई सहज बनाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । ह्विल चेयर र सेतो छडी भन्दा श्रवण यन्त्र केही महंगो छ । करि १५० भन्दा धेरै श्रवणयन्त्र वितरण गरिसकिएको छ । बाहिरबाट सहयोग ल्याएर लायन्स क्लब अफ पोखरा अन्नपूर्णले यस वर्ष १ हजार ५ सय भदा धेरै श्रवण यन्त्र बाड्ने उद्घोष गरिसकेको छ । लायन्सका साथीहरु सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ । स्वतस्फुर्त रुपमा दिएर बाचौं भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम भइरहेका छन् जुन खुसीको कुरा हो । अन्य डिस्ट्रिक्टका साथीहरुले पनि यस नारालाई उपयुक्त ठानेर काम गरेको पाइएको छ ।
एनएलएफ कोषमा रकम वृद्धि गर्नुको उद्देश्य के हो ?
लायन्समा एनएलएफ कोष छ । यस फण्डमा करिव ४ करोड भन्दा धेरै रकम छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा डिष्ट्रिक्टलाई चिनाउन पनि यसले सहयोग गरेको छ । यस वर्ष करिव १ करोड ८५ लाख बरावरको कमिटमेन्ट आएको छ । करिव २ करोड रुपैयाँ यो वर्ष बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । यो कोष नेपालको आफ्नो सम्पत्ती हो । यस कोषबाट आएको व्याजले वर्षेनी धेरै क्लबहरुले सामाजिक काम गर्न सफल भएका छन् । कोषलाई अझ बढी बलियो बनाएर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर रकम बृद्धिमा लागेका हौं । क्लबहरुको साथ राम्रो पाएका छौं ।
अन्य कुनकुन क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् ?
लायन्सले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी सामान, कपडा साथै छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आइरहको छ जसले विद्यार्थीलाई पनि सहज भएको छ । समय समयमा विद्यालयका विद्यार्थीको आँखा परीक्षण पनि गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार औषधी तथा चश्मा वितरण गरिन्छ । गाउँ गाउँमा गएर मेगा हेल्थ क्याम्प पनि लायन्स क्लबले गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा उपचार गर्न नसकेका व्यत्तिलाई मेगा हेल्थ क्याम्पले ठुलो सहयोग पु¥याएको छ । जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लायन्स भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतबाट पीडितलाई उद्धार गर्ने तथा राहत वितरण गर्ने काममा पनि लायन्स अगाडि नै छ ।
यस वर्ष लायन्सबाट तनहुँले पाउने ठूलो उपलब्धी के हो ?
एलसिआइएफले एउटा डिष्ट्रिक्टलाई २ वटा प्रोजेक्ट दिन्छ । यस वर्षको एउटा प्रोजेक्ट तनहुँको आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसलाई दिइनेछ । साइन्स ल्याबको लागि १ लाख डलर दिनेछौं र ल्याबको नाम लायन्स साइन्स ल्याब रहनेछ । यसले लायन्सप्रति अझै आर्कषण बढ्नेछ । अर्को प्रोजेक्ट धादिङमा दिदैछौं । त्यसबाट धादिङमा हस्पिटल बन्नेछ । दोस्रो क्याबिनेट मिटिङ तनहुँमै आयोजना गर्ने अवसर समेत मिलेको छ । यो पनि तनहुँका लागि उपलब्धीपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
क्याबिनेट मिटिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
मलाई आफ्नो जिल्लामा क्याविनेट मिटिङ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । त्ससै अनुसार मिटिङ गरिएको हो । हामीले यसलाई भव्य एवं सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नेछौं । काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरमा पाइने सुविधा यहाँँ नपाइएला तर सकेसम्म हामी व्यवस्थित बनाउनेछौ । दमौलीमा होटल कम छन् । यसै समयमा आदिवासी जनजाति तनहुं साँस्कृतिक पर्यटन महोत्सव चलिरहेको छ । यसले केही अप्ठ्यारो पक्कै पर्नेछ । बन्दिपुर र पोखरा दमौलीबाट खासै टाढा छैनन् । त्यहाँका होटलमा पनि हामीले साथीहरुलाई राख्न सक्छौं । बन्दिपुर पनि तनहुको हो र यसको प्रर्वद्धन पनि हाम्रो दायित्व हो । बन्दिपुको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि यसले सहयोग पुग्नेछ । क्याबिनेट मिटिङमा करिव २ हजार भन्दा धेरै लायनको सहभागिता रहनेछ । यसले तनहुंको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ ।